Somaliland oo u Digtay Ergooyinka Caalamiga ah iyo Hay’adaha Ka Hawl Gala Dalka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Somaliland oo u Digtay Ergooyinka Caalamiga ah iyo Hay’adaha Ka Hawl Gala...
Somaliland oo u Digtay Ergooyinka Caalamiga ah iyo Hay’adaha Ka Hawl Gala Dalka
Xukuumadda Somaliland ayaa mar kale ku celisay go’aankii xidhiidhka wada shaqayneed ee dalalka caalamka iyo hay’aduhu inuu yahay in ay Somaliland ula dhaqanto dal madax-bannaan oo aan qayb ka ahayn Soomaaliya.
Waxaana loogu baaqay in safiirrada iyo ergooyinka ka socda waddamada caalamka, madaxda ururrada caalamiga ah iyo hay’adaha ka hawl-gala gudaha Somaliland ay dhawraan qarannimada Somaliland.
Sidaasina waxaa laga sheegay shirkii golaha wasiirrada Somaliland ee shalay oo uu shir guddoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo uu wehelinayay madaxweyne ku-xigeenkiisa C/raxmaan Saylici.
War-saxaafadeed laga soo saaray shirkii golaha wasiirrada oo uu ku saxeexnaa af-hayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac, ayaa lagu sheegay in ay reebban tahay in aan dalka Jamhuuriyadda Somaliland laga fulin Karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin dalka Somaliland.
Sidoo kale cidna ma fulin karto mashaariic aan oggolaanshahooda laga haysan hay’adda dawladdeed ee ay khusayso.
“Golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland, waxay mar kale ku celilyeen go’aanka Jamhuuriyadda Somaliland ee xidhiidhka wada shaqayneed ee dalalka caalamka iyo hay’aduhu inuu yahay in beesha caalamku ay Somaliland ula dhaqanto dal madax-bannaan oo aan qayb ka ahayn Soomaaliya.
Sidaa awgeed, waa in Safiirrada iyo ergooyinka ka socda waddamada caalamka, madaxda ururrada caalamiga ah iyo hay’adaha ka hawlgala gudaha Jamhuuriyadda Somaliland ay dhawraan Qarannimada Somaliland.
Kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta Somaliland, waana in aanay ku xadgudbin xuduudaha dhuleed, cireed iyo baddeed ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Dhammaan qoraalada iyo macluumaadyadda (documents) mashaariicaha ay hay’aduhu ka fulinayaan Somaliland waa in ay u isticmaalaan magaca, khariiradda, astaanta iyo calanka Somaliland leedahay ee gaarka u ah.
Waxaa reebban in aan dalka Jamhuuriyadda Somaliland laga fulin Karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin dalka Somaliland.
Sidoo kale cidna ma fulin karto mashaariic aan oggolaanshahooda laga haysan hay’adda dawladdeed ee ay khusayso”ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi.
Dhinaca kale isla shirkii shalay ee golaha wasiirrada Somaliland ayay wasiirradu ansixiyeen siyaasadda qaranka ee maalgashiga dalka, kadib markii ay wasiirradu dood iyo falayn ka yeesheen.
Sidoo kale fadhigii maanta ee golaha wasiirrada Somaliland ayaa golaha loo qaybiyay nuqullada qabyo qoraalka xeerka maalgashiga.
“Golaha wasiirradu waxay dood dheer ka dib ansixiyeen siyaasadda qaran ee maalgashiga, sidoo kale waxa golaha loo qaybiyay nuqullada qabyo qoraalka xeerka maalgashiga.
Waxaana golaha sharaxaad ka siiyey wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo garyaqaanka guud ee qaranka”